Linn Ko: iPhone တွေမှာ Android Install လုပ်မယ်
လူတိုင်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းပညာပဲ ပြောပေးလိုက်ပါတယ် ဘာမှ မခက်တာကိုး
Step 1: Download ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းပါ
Step 2: Windows7မှာ Run လိုက်တဲ့ အခါမှာ
Error လေးတစ်ခုပြပါလိမ့်မယ် "Apha Expired! New Release available" အောက်က ပုံ အတိုင်းပေါ့
ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ သင့်စက်က နာရီနဲ့ ရက်စွဲကို ပြောင်းပေးလိုက်ပါ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ right and change the current date. လနေရာမှာတစ်လလောက်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ထည့်ထားတာလေးကြို ပန်ဖွင့် ကြည့်ပါ .
Note: နောက်ထပ် error တစ်ခုတက်လာနိုင်ပါသေးတယ် ဒါလဲ အသင့်ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ် "Your computer is blocked to run this application", ဒီလိုတက်လာပြောနေရင် iPhoDroid icon မှာ ညာကလစ်နှိပ် "run as administrator".နဲ့ သွားပေးလိုက်ပါ
Step 3: iPhoDroid ကို ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အောက်ကပုံလို မြင်ရပါမယ်
Step 4: သင့် iPhone ကို USB ကြိုးတပ်ပြီး computer နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ နောက် "Shoot" ကို နှိပ်ပါ
Step 5: နဲနဲကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ drivers နှင့် files တွေကို ရှာနေပါမယ် ဘာမှလုပ်စရာမလို စောင့်နေလိုက်ပါ အော်တို လုပ်သွားပါမယ်
Step 6:သင့်iPhone အလိုလို reboot ကျပါမယ် ပြန်တက်လာရင် Recovery Mode ကနေ ပြန်ဝင်လာပါမယ်
Step 7: iPhoDroid.exe ကို တခါပြန် စမယ် အဲမှာ "Exit Recovery Mode" ကိုနှိပ်ပါ
Step 8: အလုပ်လုပ်နေတာ ပြီးသွားပြီဆိုရင် သင့် iPhone 3G မှာ Android ရပါပြီ.
Note:iPhone 3G အတွက်သာ
နောက်တစ်နည်း ကြည့်လိုက်နော် မထူးတော့ပါဘူး
Download လုပ်လိုက်နော် ဘာမှ အခက်ဘူး အတူတူနီးပါးပါပဲ
နောက်တစ်မျိုးကတော့ နဲနဲ ခက်ပါမယ် in the box နဲ့ လုပ်တာပါ နောက်နည်းတွေက
Jailbreak လုပ်တာ တွေပါလာတော့ ရှုပ်လာတယ် တော်ပြီနော်
Posted by Linn Ko at 12:45 PM